रणभुमी बन्यो बानेश्वर ..हेर्नुहोस प्रहरीले लखेटि लखेटि टाउको फुटायो । - info4nepal
रणभुमी बन्यो बानेश्वर ..हेर्नुहोस प्रहरीले लखेटि लखेटि टाउको फुटायो ।
काठमाडाैं – डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रीएका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले बानेश्वरमा बल प्रयोग गरेको छ । प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोडेर अगाडी बढ्न थालेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रृ ग्याँससँगै लाठी प्रहार गरेको छ ।
डा.केसीको समर्थनमा उत्रीएका आन्दोलनकारीलाई तितरवितर पार्ने क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट केहि व्यक्ति घाईते समेत भएका छन् । डा. केसीको समर्थनमा मानवअधिकारवादी, विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्यकर्मी लगायत सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको छ ।
नेपाल तरुण दलको प्रद्शनको क्रममा प्रहरी दमनको क्रममा घाईते हुनु भएका दलका अध्यक्ष जितजङ बस्नेत र नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटी लगायत सबै घाइते तरुण तथा सन्चारकर्मी हरुको को स्वास्थ लाभको कामना गर्दछु । यस्तो किसिमको हस्तक्षप र दमनको खुलेर बिरोध गरौ